Emume nke Jisos Kraist, Eze nke Eluigwe na Ala, Sọnde 22 Nọvemba 2020 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ememe nke Jisus Kraist, Eze nke Eluigwe na Ala, Sọnde 22 Nọvemba 2020
Ememe dị mma nke Jizọs Kraịst, Eze nke Eluigwe na Ala! Nke a bụ ụbọchị ụka nke ikpe-azụ nke afọ Nzukọ-nsọ, nke pụtara na anyị lekwasịrị anya n’ihe ikpe-azu na ebube nile na-abịa! Ọ pụtakwara na Sọnde na-esote abụrụla Sunday mbụ nke biakwa obibia.
Mgbe anyị kwuru na Jizọs bụ eze, anyị na-ekwu ihe ole na ole. Nke mbụ, ọ bụ ụkọchukwu anyị. Dị ka onye ọzụzụ atụrụ anyị, Ọ na-achọ iji aka ya duru anyị dị ka nna na-ahụ n'anya. Ọ chọrọ ịbanye ndụ anyị n'onwe anyị, nke ọma na nlezianya, na-adịghị etinye onwe ya kama na-enye onwe ya mgbe niile dị ka onye ndu anyị. Ihe isi ike dị na nke a bụ na ọ dịịrị anyị mfe ịjụ ụdị eze a. Dị ka Eze, Jizọs chọrọ ịduzi akụkụ nile nke ndụ anyị ma duzie anyị n'ihe niile. Ọ na-achọ ịghọ onye ọchịchị kachasị na eze nke mkpụrụ obi anyị. Ọ chọrọ ka anyị gakwuru Ya n'ihe niile ma dabere mgbe niile na Ya.Ma Ọ gaghị ewetara anyị ụdị eze a. Anyị aghaghị ịnakwere ya n'enweghị ihe mgbochi. Jizọs ga-achị ndụ anyị naanị ma anyị chịlie aka elu. Mgbe nke ahụ mere, ka osila dị, Alaeze Ya ga-amalite onwe ya n'ime anyị!
Ozokwa, Jisos choro ka e guzobe Alaeze Ya n’ime uwa a. Nke a bụ ihe mbụ n’abụ mgbe anyị ghọrọ atụrụ Ya ma mgbe ahụ anyị ghọrọ ngwa ọrụ Ya iji nyere aka ịgbanwe ụwa. Kaosinadị, dị ka Eze, Ọ na-akpọkwa anyị ka anyị guzobe ọbụbụeze ya site n'ịhụ na a na-akwanyere eziokwu Ya na iwu Ya ùgwù n'etiti ọha mmadụ. Ọ bụ ikike Kraịst nwere dị ka Eze na-enye anyị ikike dị ka Ndị Kraịst ime ihe nile kwere omume iji gbochie ikpe na-ezighị ezi obodo ma mepụta nkwanye ùgwù maka mmadụ ọ bụla. Iwu obodo nile na-anata ike ya site n'aka Kraịst nanị n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ naanị Eze nke ụwa.
Mana otutu adighi amata Ya dika Eze, ya mere gini banyere ha? Ànyị kwesịrị 'iwenye' iwu Chineke n'ahụ ndị na-ekweghị? Azịza ya bụ ee na ee e. Nke mbụ, e nwere ihe ụfọdụ anyị na-agaghị emeli. Dịka ọmụmaatụ, anyị enweghị ike ịmanye ndị mmadụ ka ha gaa uka na Sọnde ọ bụla. Nke a ga-egbochi mmadụ nnwere onwe ịbanye onyinye a dị oke ọnụ ahịa. Anyi maara na Jisos choro ya n’aka anyi n’ihi nkpuru obi anyi, ma a ghaghi inabata ya n’enweghi nsogbu. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ihe anyị kwesịrị "ịmanye" ndị ọzọ. A ga-etinye "nchekwa" nke ụmụ ebu n'afọ, ndị ogbenye na ndị ngwangwa. A ghaghi idetu nnwere onwe akọnuche n'iwu ayi. Nnwere onwe iji gosipụta okwukwe anyị n'ihu ọha (nnwere onwe okpukpe) n'ime ụlọ ọrụ ọ bụla ga-abụ nke a "amanye". Ma enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị nwere ike depụta ebe a. Ihe dị mkpa iji mesie ike bụ na, na njedebe nke ya niile, Jizọs ga-alaghachi n’ụwa n’ebube ya niile wee guzobe Alaeze Ya na-adịgide adịgide. N’oge ahụ, mmadụ niile ga-ahụ Chineke etu Ọ dị. Iwu ya ga-abu otu na iwu obodo. Ikpere niile ga-egbu n’iru Eze ukwu ma onye ọ bụla ga-amata eziokwu. N'oge ahụ, ezi ikpe ziri ezi ga-achị, a ga-edozikwa ihe ọjọọ niile. Lee ụbọchị dị ebube nke ahụ ga-abụ!
Tugharia uche na ta ihunyere Kraist dika Eze.Ọ na-achịkwa ndụ gị n’ezie n’ụzọ niile? You na-ekwe ka ya na-achịkwa ndụ gị kpamkpam? Mgbe emere nke a kpam kpam, a na-eme ka Alaeze Chineke guzobe ndụ gị. Kwee ka eze chịa ka ị gbanwee ma site na gị, ndị ọzọ nwere ike ịmata ya dị ka onye nwe ihe niile!
Onye-Nwe-Ọha, bụ Onye-Nwe-Ọha l'ekfu ndọwa. Are bụ Onyenwe ihe niile. Bịa chịa na ndụ m ma mee ka mkpụrụ obi m bụrụ ebe obibi gị dị nsọ. Onyenweanyị, bia gbanwee ụwa anyị ma mee ka ọ bụrụ ebe ezigbo udo na ikpe ziri ezi. Ka alaeze gị bịa! Jesus ekwere m na gị.